အသငျးရဲ့တိုကျစဈမှူးသဈကို စိနျချေါစကားပွောကွားလိုကျသညျ့ ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဆိုးလျရှား။ – SoShwe
Home/Sport/အသငျးရဲ့တိုကျစဈမှူးသဈကို စိနျချေါစကားပွောကွားလိုကျသညျ့ ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဆိုးလျရှား။
အသငျးရဲ့တိုကျစဈမှူးသဈကို စိနျချေါစကားပွောကွားလိုကျသညျ့ ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဆိုးလျရှား။
ယူနိုကျတကျအသငျးနညျးပွဖွဈသူ ဆိုးလျရှားဟာ ပွီးခဲ့သညျ့ဆောငျးရာသီ အပွောငျးအရှေ့၌ တရုတျစူပါလိဂျကလပျ ရှနျဟိုငျးရှငျဟှာအသငျးမှ အငှားဖွငျ့ချေါယူထားသညျ့ တိုကျစဈမှူးသဈ အီယာလိုနဲ့ ပတျသကျပွီး အသငျးကို အပွီးသတျပွောငျးရှလေ့ာနိုငျရနျအတှကျ စိနျချေါစကားပွောကွားလိုကျပါတယျ။ အဆိုပါနိုငျဂြီးရီးယားလူမြိုးတိုကျစဈမှူးသညျ ယူနိုကျတကျအသငျးကို (၆) လအငှားစာခြုပျဖွငျ့ ရောကျရှိလာခဲ့သညျ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး သူ့ရဲ့အငှားစာခြုပျ၌ အပွီးသတျချေါယူခှငျ့အတှကျ စာခြုပျခြုပျဆိုထားခွငျးမရှိကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
အသကျ (၃၀) အရှယျရှိပွီဖွဈသူ အီယာလိုနဲ့ ပတျသကျ၍ ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဆိုးလျရှားက “ဒါက အငှားပဲရှိပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခငျဗြားအနနေဲ့ အသငျးကိုရောကျနပွေီး ပုံစံကောငျးပွသနိုငျမယျဆိုရငျ ဒါက အခှငျ့အရေးတဈခုဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ဒီအခကျြက အသငျးမှာရှိနတေဲ့လူတိုငျးအတှကျ အတူတူပါပဲ။ အသငျးရဲ့အမွဲတမျးကစားသမားပဲဖွဈဖွဈ၊ အငှားချေါယူထားတဲ့ ကစားသမားပဲဖွဈဖွဈ အကောငျးဆုံးပုံစံတဈခုကို ပွသနိုငျမယျ၊ အသငျးကိုတိုးတကျအောငျ ကူညီပေးနိုငျမယျဆိုရငျ အပွီးသတျစာခြုပျခြုပျဖို့၊ စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ အခှငျ့အရေးရှိပွီးသားပါ။”
“အီယာလိုတဈယောကျတညျးအတှကျ အခှငျ့အရေးမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူကအသငျးအတှကျ တတျနိုငျသလောကျ ပေးဆပျခငျြနပွေီး သူသာဆကျနခေငျြတယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့အပျေါမှာပဲ မူတညျပါတော့တယျ။” ဟု ဖှငျ့ဟပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အီယာလိုသညျ ပရီးမီးယားလိဂျအတှအေ့ကွုံရှိပွီးသား ကစားသမားဖွဈပွီး ဝကျဖို့ဒျအသငျးအတှကျ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့သညျ့ ကစားသမားတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူးသစ်ကို စိန်ခေါ်စကားပြောကြားလိုက်သည့် ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား။
ယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြဖြစ်သူ ဆိုးလ်ရှားဟာ ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွှေ့၌ တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ် ရှန်ဟိုင်းရှင်ဟွာအသင်းမှ အငှားဖြင့်ခေါ်ယူထားသည့် တိုက်စစ်မှူးသစ် အီယာလိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသင်းကို အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့လာနိုင်ရန်အတွက် စိန်ခေါ်စကားပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုးတိုက်စစ်မှူးသည် ယူနိုက်တက်အသင်းကို (၆) လအငှားစာချုပ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့သည့် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အငှားစာချုပ်၌ အပြီးသတ်ခေါ်ယူခွင့်အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အသက် (၃၀) အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ အီယာလိုနဲ့ ပတ်သက်၍ ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက “ဒါက အငှားပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားအနေနဲ့ အသင်းကိုရောက်နေပြီး ပုံစံကောင်းပြသနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒါက အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်က အသင်းမှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းအတွက် အတူတူပါပဲ။ အသင်းရဲ့အမြဲတမ်းကစားသမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အငှားခေါ်ယူထားတဲ့ ကစားသမားပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုကို ပြသနိုင်မယ်၊ အသင်းကိုတိုးတက်အောင် ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အပြီးသတ်စာချုပ်ချုပ်ဖို့၊ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ အခွင့်အရေးရှိပြီးသားပါ။”
“အီယာလိုတစ်ယောက်တည်းအတွက် အခွင့်အရေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူကအသင်းအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ပေးဆပ်ချင်နေပြီး သူသာဆက်နေချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတော့တယ်။” ဟု ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီယာလိုသည် ပရီးမီးယားလိဂ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား ကစားသမားဖြစ်ပြီး ဝက်ဖို့ဒ်အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သည့် ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous ????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ??????? ????????????????????? ?????????????? ???????????? ????????????????????
Next စပါးကှငျးလယျကစားသမားတဈဦးကို ချေါယူရနျကွိုးပမျးလာဖှယျရှိသညျ့ ယူနိုကျတကျ။